Anopfuura makambani matsva makumi mapfumbamwe akatopinda YUGAGRO 2021 - Potato System Magazine
в Chiziviso, nhau
Kunyoreswa kwevashanyi kuchiratidziro "YUGAGRO 2021" kunoenderera
Kugadzirira kweYUGAGRO 2021 kuri kuwedzera simba: anopfuura 90 makambani matsva atojoinha kuratidzwa kukuru kwemishini yekurima, zvishandiso uye zvigadzirwa zvekugadzira nekugadzirisa zvirimwa zvekurima muRussia. Vatsva vatori vechikamu vanounza zvigadzirwa zvavo muzvikamu zvese zvechiratidziro: "Zvekurima michina uye zvikamu zvekusiya", "Agrochemical zvigadzirwa nembeu", "Midziyo yekuchengetedza nekugadzirisa zvigadzirwa zvekurima" uye "Midziyo yekudiridza neyekuchengetedza dzimba." Kuti varatidze zvitsva zvavo paYUGAGRO 2021, vatambi vekutanga vachasvika kubva kuAzerbaijan, Itari, USA, Belarus nedzimwe nyika dzepasi, pamwe nevakadai veRussian Federation seKrasnodar Territory, Stavropol Territory, Rostov neKursk Dunhu, Tatarstan , nedzimwe nzvimbo dzakawanda.nyika yedu.
Kubata kweYUGAGRO kwakakosha kwazvo kune agro-maindasitiri akaomarara eRussia, nekuti pano ndipo paunogona kuzivana nemhando dzakasiyana siyana dzemuchina wekurima, zvigadzirwa zvekuchengetedza zvirimwa nembeu, zvishandiso uye zvigadzirwa zvekuchengetedza nekugadzirisa zvigadzirwa zvekurima. , pamwe nemidziyo yekudiridza uye yekuchengetera zvinhu kubva kune vanotungamira vekunze uye veRussia vagadziri nevatengesi. Anopfuura makambani mazana manomwe anobva munyika dzinopfuura makumi matatu anotora chikamu muchiratidziro gore rega rega, pakati pacho pane vangangoita mazana maviri varatidziri vanotora chikamu muYUGAGRO kekutanga.
Vanopfuura mamirioni gumi nemasere mamaneja uye nyanzvi dzemakambani ekurima-maindasitiri, mapurazi evarombo nemakambani ezviyo kubva kumatunhu anotungamira eRussia, pamwe nevaparidzi vakuru vanoita basa rezvekurima, zvekudyara, michina yekurima uye kugadzirisa kwavo, vanopinda YUGAGRO kuratidzira gore rega. Kwemazuva mana echiratidziro, vashanyi veYUGAGRO vanogona:
• kuona nyika hombe uye vagadziri vepamba vane huwandu hwakawanda hwazvino tekinoroji, zvishandiso uye zvigadzirwa zvekuvandudza mhando yekugadzirwa nekugadziriswa kwezvirimwa;
• kurukurai nezvega mamiriro ekutenga uye mhinduro dzinoshanda pane zvako kugadzirwa nemisoro yemakambani anoratidzira;
• enzanisa zvinopihwa zvakagamuchirwa uye sarudza vatengesi vakanakisa kuti vakure bhizinesi rako.
Chiratidziro chekurima "YUGAGRO" inoitwa panguva yakanyanya kunaka yegore, kana, mushure mekuguma kwemwaka unotevera unopisa wekugadzira, zvinova zvakafanira kusarudza matekinoroji matsva ekuvandudza bhizinesi rako nekurigadzirira kutanga kwemwaka unotevera. . Varimi vanogona kutsvaga nekutenga michina ingagadzirise matambudziko aya pachiratidziro cheYUGAGRO 2021.
Asi imwe yemabhenefiti akakosha e "YUGAGRO" ndeyekuti pane imwechete nzvimbo yekuratidzira kurima kweRussia kuripo. Vashanyi vanogona kuzviziva nemhando izere yemidziyo yekugadzira nekugadzirisa zvirimwa zvekurima, izvo zvinonyanya kuchengetedza nguva yenyanzvi mukutsvaga mhinduro yehunyanzvi inodikanwa kune yavo bhizinesi.
Chiratidziro "YUGAGRO" inotsigirwa nehurumende yeRussian Federation, iyo Federation Council yeFederal Assembly yeRussian Federation, Ministry of Agriculture yeRussia Federation, manejimendi yeKrasnodar Territory, Ministry of Agriculture uye Processing Viwanda. yeKrasnodar Territory, manejimendi ekuumbwa kwenzvimbo yeguta reKrasnodar.
Yemahara kunyoreswa kwemagetsi kwevashanyi
28th International Exhibition yemuchina wekurima, zvishandiso uye zvigadzirwa zvekugadzira nekugadzirisa zvigadzirwa zvezvirimwa "YUGAGRO 2021" ichaitwa munaNovember 23-26, 2021 muKrasnodar (VKK "Expograd Yug"). Mahara emagetsi kunyoreswa kwevashanyi akatovhurwa.
Kunyoresa paYUGAGRO webhusaiti kunopa vashanyi zvakwakanakira, kusanganisira kuchengetedza nguva nemari. Nekunyoresa pawebhusaiti mahara uye nekugamuchira tikiti remagetsi, mushanyi anogona kusvetuka mutsetse wetikiti padhesiki rekuratidzira, asi oenda akananga kumahombekombe eiyo "Expograd Yug" yekuratidzira yakaoma. Iwe unongoda kupurinda tikiti rakanyoreswa kana kuchengetedza mufananidzo waro munharembozha yako. Kunyoreswa kwemahara kwemagetsi kunogona kushandiswa kungave nemunhu mumwe chete kana neboka revashanyi. Iyo tikiti yemagetsi inoshanda kune ese mana mazuva eYUGAGRO 4 kuratidzwa.
Uye zvakare, vashanyi kuchiratidziro vanogona kushandisa zvinyorwa zvemagetsi kuitira kuti vawane pamberi pamakambani ekuratidzira avanofarira, pamwe nezvigadzirwa nemasevhisi ayo vatori vechikamu vachazopa kuYUGAGRO 2021.
Chiratidziro "YUGAGRO 2021" chichaitwa zvichiteerana nezvose zvinodiwa kuchengetedzwa zvinotenderwa neRospotrebnadzor uye Global Association yeiyo Exhibition Viwanda UFI.
Strategic mutsigiri wechiratidziro - CLAAS kambani
General Partner wechiratidziro ndiRostselmash
General mutsigiri wechiratidziro - ROSAGROTRADE kambani
Kurumidza kunyoresa YUGAGRO 2021 uye uwane tikiti yemahara yekushanyira chiratidziro chakakura kwazvo chekurima muRussia!
Kukohwa kwembatata inokurumidza kukura uye mhando yemiriwo inotanga muAltai
Chinodiwa chikuru pambeu ndechekuti dzinofanirwa kunge dziri dzemhando yepamusoro!
Munharaunda yeTula yakafanotaura kuderera kwegoho rembatatisi
Dagestan inowana gohwo rakakura rembatatisi